Asa fisolokiana tao Sambava : Mpitsara iray voasambotra -
AccueilRaharaham-pirenenaAsa fisolokiana tao Sambava : Mpitsara iray voasambotra
Asa fisolokiana tao Sambava : Mpitsara iray voasambotra
23/06/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ny alatsinainy lasa teo no nosamborin’ny mpitandron’ny filaminana avy amin’ny zandarimariam-pirenena sampana ady heloka bevava avy ao Sambava ny mpitsara iray sy ny mpamily azy ary ny polisy miisa ro.Ny anton’izany dia ny fisolokiana filazana ho iraky ny primatiora ka nisavan’izy ireo ny tranona mpamongady lavanila iray tao Sambava. Raha ny fantatra sy ny fampitam-baovao avy any an-toerana dia nitondra taratasy fahafahana misava ny trano izy ireo, saingy hosoka izany. Tsy vitan’ny fisavana anefa fa dia nogiazana avokoa ny lavanila tao an-tranon’io mpandraharaha io, izay raha ny fanazavana azo dia milanja manodidina ny 800 kilao eo ho eo izany. Omaly no fantatra fa niakatra fampanoavana ireo tariky ny mpitsara iray voasambotra tao Sambava io, ka nahazo fahafahana vonjy maika izy enina ireo. Tsy mahefa amin’ ny raharaha rahateo ny mpitsara any an-toerana ka voatery nafindra aty an-drenivohitra ny fikirakirana ny antontan-taratasy. Omaly hariva ihany moa dia fantatra fa nanainga ho aty Antananarivo izy ireo.
Tsy vao izao no naharenesana mpitsara manao asa maloto tahaka izao fa saika efa mahazatra izany, tsy vao ela akory izany raha tsiahivina ny raharaha fakana an-keriny an’ i arnaud izay nampidirana am-ponja, mpitsara iray tany Toamasina. Hatreto aloha mbola samy tsy nandrenesam-peo ny sendikà sy ny ministera manoloana ity raharaha ity. Raha ny zava-misy any amin’ny faritra SAVA dia hita izao fa samy manao izay ho afany amin’ny fanararaotana sy fampiasana ny fahefana ananany eo am-pelatanany ahafahana mangalatra lavanila ireo tompon’andraikitra any an-toerana noho ny fiakaran’ny vidin’ny lavanila. Tsiahivina fa noho ny zava-misy teo aloha tany amin’ iny faritra iny noho io raharaha lavanila io dia nanjaka ny fitsaram-bahoaka. Tsy mahagaga anefa izany satria dia ny tompon’andraikitra ambony mihitsy izao no manao ny asa ratsy. Tsiahivina ihany koa fa ny fanambaran’ny praiministra lehiben’ny governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier fa « misy ny tompon’andraikitra ambony izay tafiditra anatin’io raharaha halatra lavanila io, ka tsy hitsisy ny fitondram-panjakana ho an’ireo izay tratra fa hiharan’ny lalàna avy hatrany’’
Obstkisten Lagerhaus dans L’incendie du Rova de Manjakamiadana, 20 ans plus tôt
« Mpitari-bato vilam-bava » izay no hisokajian’ny maro ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana manoloana fihetsika asehony eto amin’ny firenena ankehitriny. Saika mifanohitra amin’izay lazainy avokoa mantsy ny zavatra hataony, sy hitondrany ireo mpikambana ao amin’ny antoko ...Tohiny
Fiatrehana ny krizy politika : Nampiseho fahendrena ny Filoham-pirenena
financiële administratie: Enjoyed the post.